Farmaajo, Kheyrre iyo kuwa imaan doona, ma joojin karaan qaraxyada ilaa laba arin laga helo Soomaali! | Allmareeg Online
Home Wararka Maanta Farmaajo, Kheyrre iyo kuwa imaan doona, ma joojin karaan qaraxyada ilaa laba...
Farmaajo, Kheyrre iyo kuwa imaan doona, ma joojin karaan qaraxyada ilaa laba arin laga helo Soomaali!
Markii aan ka hadlo aragtideyda, ma aaminsani in masuuliyiinta xilka noo haayo, sida Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha, Baarlamaanka, Wasiirada iyo masuuliyiinta amniga, ay wax ka qaban karaan dhibaatooyinka dalka ka jiro ilaa laga helo laba arin.
Madaxweyne kasta waa rabaa in uu dalka amni ka dhigo, siyaasada iyo dhaqaalaha hagaajiyo si uu kursiga usii joogo ama magac iyo xasuus uga tago. Qaraxyadaan waa jireen 10kii sano ee la soo dhaafay ee maanta uun ma ahan.
Aan si dhab ah u hadalno, waaqiciga jirana aan ku xisaabtano. Sidoo kale aan iska deyno taageerada waalida ah iyo mucaaradnimada waalida ah.
1) Soomaali waxay guranayaan miraha CARADA ALLE, qaarkeen waxay dambiyo culus ka galeen Alle, inta kalane qaar waa ku eegteen qaarna waa ka aamuseen ee aan Alle u towba keeno.
Si niyad ah oo qalbiga ah oo aan ku dareen SOON iyo SALAAD Alle bari ah aan sameyno oo aan weydiisano dambi dhaaf Alle si culeeska iyo dhibka aan uga baxno, Insha Allaah Alle towbada waa aqbalaa waana ka bixi doonaa hadii aan la nimaano niyad iyo towba keen.
2) Soomaali oo mid ah oo dhibka meel uga soo wada jeesta ilaa laga helo dhibkaan dhamaan maayo, sababtoo ah dhibka hal iyo laba ama koox kaliya ma geestaan, ee qaar ayaa Canshuur bixiya, qaar ayaa xog bixiya, qaar ayaa fududeeya, kuwa fuliya iyo kuwa og oo ka aamusa ayey isugu jiraan, markii ay halkaas joogto waxaan u baahanahay dad mid ah oo arintaan meel uga soo wada jeesta si aan u badbaadsano inta noo hartay.
Saddex kamid ah Bulshada Soomaaliyeed aad ayaa loo dhageestaa waana la qaataa talooyinkooda.
1) Haweenka Soomaaliyeed waxay ugu horreeyaan kuwa bulshada badala oo kiciya sababtoo ah nolasha ayaa ka bilaabata kuna dhamaata, waxayna dhaleen kuwa la dilayo iyo kuwa dilaya, codkooda waxa uu badali karaa Qaranka oo dhan hadii ay Xaafadaha ka soo baxaan oo ay dhahaan, intaan ka badan ma dulqaadan karno!
2) Culumada diintu waxay qeyb weyn ka yihiin dadka awoodda u leh in ay maalmo ku jihiyeen bulshada Soomaaliyeed sababtoo ah waa bulsho Muslim ah oo Emotional ah, sidaas darteed Culumada dadka ha jiheyso.
3) Odayaasha dhaqanku waxay ahaayeen umad hogaamisa bulshada oo taladooda la qaato. Umadda Soomaaliyeed diintu mawada yaqaanaan lkn waxaa hagi jiray dhaqanku, waxayna lahaayeen xeerar lagu dhameeyo colaadaha iyo dhibaatooyinka.
Odayaashaas hadda waxay ku dambeeyaan Soomaaliland iyo Puntland waana ka awood badan yihiin dhamaan maamulada meesha ka jira, Alle ha u dhaafo bulshada degaankana waxaa kula talinayaa in ay ilaashadaan.
Rabbi aan barino si aan dhibka uga baxno, aan is cafino, xaasidnimadana aan iska deyno, inta aan is heysno ayey dadkii dhamaadeene.
Previous articleJadwalka Doorashada Galmudug oo Markale fashilmay iyo Caqabado taagan
Next articleMadasha Xisbiyada oo kulan xasaasi ah ku yeeshay Muqdisho
Khilaaf hor leh oo soo kala dhex-galay Madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo dhawaan Maamulka Somaliland ugu baaqay in wada-hadal lagu dhammeeyo muranka ka taagan dhulka ay Somaliland qabsatay,hayeeshee...